Ukuhlukana kwedlozi – iAfrika
Ngokwenkolelo yesizwe samaNguni idlozi lehlukene ngokwezigaba, kodwa ngokujwayelekile abantu abaningi bazisa idlozi kakhulu ngomsamo nabaphansi.
Idlozi lomndeni/ ngokwesibongo
Lapha sisuke sikhuluma ngabaphansi, abangasekho, abaphila ngokukamoya kodwa abake baphila emhlabeni. Kunenkolelo yokuthi ngemumva kwethuna baye basondelane noMvelinqangi. Bona sixhumana nabo ngokushisa impepho emsamo sikhulume nabo ngomlomo, ukubenzela nokugcina amasiko ngokuhluka kwezibongo kanye nosizo oluvela kubelaphi bendabuko ngokusixhumanisa nabo. Leli idlozi elisebenza ukuvikela, ukuletha izinhlanhla kanye nokuba izithunywa zethu kuNkulunkulu kulokho esikudingayo.
Idlozi lomuntu ngamunye
Uma sikhuluma ngedlozi lomuntu ngamunye kusuke kukhulunywa ngesithunywa ngenkolelo yokuthi umuntu ngamunye ekuphileni kwakhe kuba nengilozi ethunyelwa ukuba imugade futhi imuvikele ezindleleni zakhe. Indlela axhumana nayo ngayo ukwenza kahle emehlweni omhlaba nokulandela imiyalelo yobungcwele bukaNkulunkulu ngoba nayo isuke iyisipho esivela kuMdali, lokho kube sekwenza ukuba ibe idlozi elihle kuyena.
Idlozi lesintu libhekene nabElaphi bendabuko, izangoma, izinyanga kanye nabathandazi. Ukuhlangana kwalo nomuntu ophila enyameni kuba yingalesi sikhathi eseqala uhambo lakhe lokuphothula ukuba umelaphi wendabuko abizelwe kukho. Lapho sibala ukwethwasa, ukwethwasa ngokwamanzi, ukuthola amandla okwelapha (umoya) njalo njalo. Kubelaphi kusuke kuyidlozi lesintu elinikeza amandla okwelapha, ukukwazi ukuxhumanisa umuntu nedlozi lakhe, ukuboniswa kanye nokukwazi ukubona kwelikamoya okuxhumanisa abantu nezithunywa zabo kulokho ezikudingayo.